Mogadishu Journal » 2021 » March » 31
Dhaawaca Robert Lewandowski waxaa laga yaabaa inuu dhaawac culus u geysto fursadiisa ah inuu jabiyo rikoorka Gerd Muller, Roy Makaay ayaa sidaas leh. Robert Lewandowski ayaa lumin lahaa fursad uu ku jabinayo rikoorka gooldhalinta Gerd Muller ee hal xilli ciyaareed Bundesliga,...
The White House is set to announce a massive plan for everything from highway bridges to electric-vehicle charging stations funded by tax hikes on corporations. 31 Mar 2021 United States President Joe Biden is set to unveil an ambitious development plan Wednesday that includes...
Waxaa maanta kulan qado ah magaalada Muqdisho ku yeeshay qaar kamid ah madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jiray gaar ahaan Madaxda maamulada Dowlada federaalka taageersan. Kulankan qadada ah waxaa hoygiisa ku sameeyay Madaxweynaha Galmudug Mudane, Axmed Cabdi Kaariye ...
Xil ka qaadis maanta lagu sameeyay Cabdi Maxamed Rodol (Akhriso Digreeto)
Hargeisa:-Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegto uu soo saaray xilka uga qaaday Maareeyihii hore ee Hay’adda Duulista iyo Madaarada Somaliland isagoona mid kale oo cusub xilkaasi u magacaabay. Maareeyihii hore ee Hay’adda Duulista iyo Madaarada Somaliland Cabdi...
Wararkii Ugu Dambeeyay kulankii Golaha Shacabka iyo Xildhibaanada oo meel mariyay …
Muqdisho:-Waxaa goordhaw xarunta Golaha shacabka ay ku shiraan ka furmay shir ay leeyihiin Xildhibaanada golaha shacabka, waxaana shirkan Gudoominaya Gudoomiyaha golaha Maxamed Mursan Sheekh. Kulanka Xildhibaanada golaha shacabka ayaana maanta waxaa horyaalay laboajande oo kala...
Xildhibaanadii laga mamnuucay kulamada Golaha shacabka oo laga celiyay Isgoosyada …
Muqdisho:-Qaar kamid ah Xildhibaanada golaha shacabka ee dhawaan Gudoomiye Maxamed Mursal ka mamnuucay kulamada Baarlamaanka ayaa laga celiyay qaar kamid ah isgoosyada laga ilaaliyo Madaxtooyada Soomaaliya. Ciidamada amaanka ee la dhigay baraha laga soo galo xarunta Madaxtooyada...